Ngathi | Qingdao AllUniverse Machinery Izixhobo Co., Ltd.
Intengiso ezinikezelweyo kunye neNkxaso
Amaqela ethu angaphakathi aza kusebenza nawe ukukunceda ufikelele kwiinjongo zakho ezizodwa. Ukusuka kwintengiso ezinikezelweyo kwinkxaso yeetekhnoloji yabathengi nangaphaya, siya kuhlala silapha ukunceda.
Advanced ukusika technology
Sinobuchule bokuqhuba imisebenzi yobuchwephesha eyahlukeneyo kwicandelo lezisombululo zokomelela komzimba, oku kwenziwa ngokuqokelela iziqinisekiso zemfundo, uqeqesho kunye namava.
Inkxaso yoMthengi engenakuthelekiswa nanto
Iipesenti ezingama-90 zokuqala zokulungisa. Ifestile yokuphendula ngeyure ezingama-48. Kwaye ngobuchwephesha betekhnoloji obumangalisayo, sinokubonelela ngeenkonzo zokuqonda isifo kude okanye kwindawo ekuyo.
Iyonke iNkxaso yeNtengiso
Ufuna ukwazisa abathengi malunga neenkqubo ezinomdla kunye neemveliso ezenza indawo yakho yahluke, kwaye sifuna ukunceda. Sibuze malunga nokwazisa okwenziweyo, izixhobo zokukunceda ufikelele kunye nokugcina abathengi njengangaphambili.
Gcina ukwenza izinto ezintsha kunye nokuphuhlisa, ukunceda abantu, Ukuphucula umgangatho wobomi
Ukunyaniseka sisiseko sophuhliso lweshishini, umgangatho ngumphefumlo weshishini
Ukuzithemba, ukunyamezelana, umceli mngeni, ukuzingisa, ukuvelisa izinto ezintsha, uxanduva, umbulelo
Umgangatho ophezulu, ukubonakala kwangaphandle, kunye noyilo lwezesayensi kunye nexabiso elifanelekileyo!
Qingdao Bonke oomatshini Universe yasekwa ngo-2008. Kuyinto umenzi kweentlobo ngeentlobo iimveliso ukomelela ukuba une-Independent R & D, imveliso kunye nenkonzo zobugcisa. Emva kweminyaka emininzi, i-All Universe iphumelele uphawu olukhokelayo -AOYUZOE. Kuthatha ubulunga kunye nenkonzo njengenkcubeko, ukunyaniseka njengesiseko, esenza ukuba umhlaba ube ngcono kwaye ube ngcono njengemishini!
I-Qingdao Yonke indibano yocweyo ixhotyiswe ngezinto ezininzi ezinkulu, ezichanekileyo, kunye nezixhobo ezinqabileyo, ezinje ngokusika isinyithi, ukuwelda kunye nelaser. Yinkampani ekhokelayo enesakhono esifanelekileyo sokuyila iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nezixhobo kunye nezibonelelo ezilungileyo.
Qingdao Yonke R & D iphela isebenzisa iikhonsepthi yoyilo eziphambili eYurophu naseMelika kunye iminyaka emininzi yamava OEM. Kwaye kunye neqela elomeleleyo leQC, iimveliso zeQingdao AllUniverse ziphumelela ingxelo entle evela kubathengi. usebenze amawaka eenkampani zehlabathi, uninzi lwabathengi bexesha elide.
I-Qingdao AllUniverse iya kuqhubeka nokuphucula kunye nokuzisa izinto ezintsha ukuzisa iimveliso ezintle kubathengi. Ikwazimisele ukubambelela kwifilosofi yeshishini yentsebenziswano kunye nokuphumelela! Njengomthengisi igolide, Qingdao Alluniverse soze abathengi abakhohlisayo. Ngokutyikitya isivumelwano somgangatho kunye nexesha lesivumelwano sokuhambisa njengesiqinisekiso.
Wamkelekile izihlobo ezivela kwihlabathi liphela ukuya kwiQingdao AllUniverse, ukuhlola, ukukhokela kunye nokuthetha-thethana! Kholelwa ukuba iQingdao Yonke indalo lukhetho lwakho olulungileyo!
Umpu Wokuphulula, Ukuphulula umpu 30 isantya, Ukujikeleza ibhayisekile, I-Iron Gym Tsala ibha, Ukuzivocavoca ngebhayisikile ejikelezayo, Umpu omncinci wokuphulula,